Ukuphucula umgangatho wefoto kwi-Photoshop ngokulula nangokukhawuleza | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UPablo Gondar | | Idizayini yeMifanekiso, Ukufota, Photoshop
Ukuphucula umgangatho wefoto kwi Photoshop ngokukhawuleza nangokulula, yinto enokubusindisa ubomi bethu ngaphezulu kwesihlandlo esinye. Kwenzekile kuthi sonke emva komnye ukuthatha ifoto Sifumana iifoto ezingafaniyo kwaphela, ukungabikho sesichengeni ... ngokufutshane, ukunqongophala komgangatho womfanekiso.
Amaxesha amaninzi senza Iifoto eziphathwayo ukuba zonge ixesha kodwa kumaxesha amaninzi umgangatho weefoto awulunganga, ngenxa yesi sizathu nezinye kufanelekile ukuba wazi ezinye imiba esisiseko ukuphucula umgangatho Iifoto zethu kwi Photoshop.
Zezi amacandelo ukuba siza kuphinda sisebenzise i-Photoshop ukuphucula umgangatho yemifanekiso yethu:
Siza kuqala phinda ubambe ukubhengeza yokufota. Ukuvezwa, nokuba kukwe-analogu okanye kwidijithali, kubonisa ubungakanani bokukhanya oko kungena kumfanekiso wethu. Ukuba ukukhanya okuninzi kuza emfanekisweni kuya kutshiswa ngakumbi kwaye ukuba ukukhanya okuncinci kuza emfanekisweni kuya kuba mnyama. Xa umfanekiso unokukhanya okuninzi (ukukhanya okuninzi) ubizwa njalo isitshixo esiphezulu, kwaye xa sinokukhanya okuncinci kuyabizwa iqhosha eliphantsi. Kuxhomekeka kwinto esiyikhangelayo, siya kukhetha into ethile okanye enye.
Ukuphinda usebenze kwakhona ukubhengeza ngaphakathi Photoshop Kufuneka nje siye ukhetho umfanekiso / uhlengahlengiso / ukuvezwa, itab iya kuvulwa kwaye kuya kufuneka kuphela lungelelanisa ukubonakaliswa ukuthanda kwethu.
Into elandelayo esiza kuphinda siyibambe ngendlela eqhelekileyo yile umgangatho wombala kumfanekiso, ngenxa yoku sihamba isithuba umfanekiso / useto / ubunzulu. Olu khetho lusivumela ukuba sikunike ngaphezulu nyanzela imibala yokufota.
La umbala okhutshiweyo yinto ebaluleke kakhulu emfanekisweni, ifoto eneyona umbala ophuzi (kushushu) kunefoto eneyona nto iphambili kuyo umbala oluhlaza okwesibhakabhaka (kubanda) kubonisa izinto ezahlukeneyo kwinqanaba le- umbala weengqondo. Ukutshintsha lo mbala ufakwe ngaphakathi Photoshop Kufuneka nje siye ukhetho umfanekiso / uhlengahlengiso / ulungelelwaniso lombala.
Photoshop unokukhetha okuhle kakhulu umbala ochanekileyo ngokuchanekileyo ngokukhetha okukhethiweyo okuvumela Khetha imibala esifuna ukuyiguqula. Ukwenza oku kufuneka siye kukhetho umfanekiso / uhlengahlengiso / ulungiso olukhethiweyo.
Kule ndlela yokukhetha ukulungiswa kokukhetha Kuya kufuneka siyiphinde imibala mncinci ngokukhohlisa iithowuni esiziboniswa sisixhobo.
El ukukhanya kunye nokungafani yinto kakhulu ibalulekile efotweni, sinokuyibuyisela kwakhona ngokubanzi kwaye ngokukhawuleza ngokukhetha uhlengahlengiso / ukukhanya kunye nokwahluka de Photoshop. Siphinda sisebenzise ukukhanya kunye nokwahluka komfanekiso ukuthanda kwethu de sifumane Iziphumo ezinomtsalane ngakumbi ngcono umgangatho womfanekiso.
Nazi ezinye ze izixhobo ezisetyenziswa kakhulu xa uphinda ungene ngaphakathi Photoshop umfanekiso ophakamileyo. Kuya kufuneka sazi ukuba sikhangela ntoni kumfanekiso wethu ukuze sazi ukuba ngawaphi amanqaku esiwabuyisela emfanekisweni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Photoshop » Ukuphucula umgangatho wefoto kwi-Photoshop ngokulula nangokukhawuleza